Ama-AHA-acids ezithombeni: izinhlobo, ukusebenza, ukuphikisana
I-ANA-compounds ithandwa kakhulu namuhla izithako ezisetshenziselwa imikhiqizo yezimonyo. Bakhombisa umsebenzi wabo kumaselula, izicubu ngisho namazinga amangqamuzana, asebenza esikhumbeni. Ngokomzimba, lezi zinhlanganisela ziyi-alpha hydroxy acids. Bayaziwa ngemiphumela yabo yokuguga nokukhukhula, izindawo zokulwa nokuguga. Kuye kwaboniswa ukuthi i-AHA acids ibekezelela isikhumba kangcono kune-retinoic acid.
Cishe zonke izinkampani zezitho zomzimba zinezigaba zokulungiselela izimonyo ezisekelwe ku-ANA. Inzuzo enkulu kunazo zonke izimonyo ezinjalo ukungabikho kwemingcele yobudala. I-ANA-izimonyo zingasetshenziswa ngokusho kwezinkomba ngisho nasebusheni. Ngokukhethekile isikhumba esinamafutha futhi esiyinkinga kunconywa ukuthi sisebenzise imikhiqizo elineziphuzo eziphuza utshwala. Lezi zinsuku zilungele isikhumba sabantu asebekhulile, esikhumbeni esinemibala.
Imiphumela yezimonyo ze-AHA
Imiphumela elandelayo yaziwa, enikezwe izimonyo ze-AHA:
i-exfoliating - i-alpha hydroxy acids ifinyelela isakhi se-corneocytes ku-stratum corneum yesikhumba;
ukufudumala, ngenxa yokuvuselelwa kwe-epidermis;
ivuselela ukuhlanganiswa kwe-collagen ne-glycosaminoglycans, ngenxa yethonya elikhuthazayo le-AXA kuma cell fibroblast;
kwandisa ukuqina kwesikhumba;
kunciphisa ukujula kwamagciwane; ihlanganisa iziphambeko zesikhumba.
Izinzuzo ze-alpha hydroxy acids
Ama-Cosmetics ane-alpha hydroxy acids enza ukuba kutholakale amangqamuzana amancane esikhumba, ngokususa amaseli asemandulo, asemandulo. Ngamanye amazwi, i-ANA inomphumela wokuhlunga. Ngaphezu kwalokho, i-alpha hydroxy acids ibhekwa njengezikhuthazo ezinhle zesibonda sokugcina, indawo lapho amangqamuzana omzimba wesikhumba akhiqizwa khona. Izithelo ze-acids zingasetshenziswa ukukhanyisa isikhumba, ukubhebhethekisa izinto ezithile ezibucayi, ngenxa yokukhanya okukhanyayo. Kuye kwaboniswa ukuthi i-AHA emazingeni aphansi avuselela isikhumba sokuvuselela futhi iyanciphisa ubukhulu be-stratum corneum. I-AHA ekugxilweni okuphezulu ishicilela i-epidermis bese ingathinta ngqo i-naderm yesikhumba. Khumbula ukuthi ukucubungula ama-acids kumakhilomitha angu-20 noma ngaphezulu kufanele kwenziwe nge-beauty salons. Kungcono ukubeka le nqubo kubachwepheshe.
Ngokusho komqondo wokucindezeleka, i-AXA inomthelela wayo ngokulawula ukwakheka kwemithi ephakathi kwe-dermis. Ukushisa kwama-Chemical kunomthelela oqinile wokucindezeleka, okwenza kusebenze izinhlelo zokuvikela isikhumba. I-Kozhamobilizuet imithombo yayo yangaphakathi, iqala ukwenza amakhemikhali abalulekile, umsebenzi ovuselelayo we-dermis ukwanda kakhulu. Ngakho-ke, ngaphansi kwethonya le-alpha hydroxy acids, i-dermis iyanciphisa futhi ilulaza i-epidermis. Ngenxa yalezi zinqubo i-stratum corneum iba yinkimbinkimbi kakhulu futhi isonwekile, imibimbi emihle esikhwameni ihlehliswa ngempumelelo.
I-alpha hydroxy acids eyisisekelo esetshenziselwa imboni yezimonyo
I-tartaric acid. Ibonakala ngokuphuma kwe-bleaching, moisturizing, exfoliating. Ezingxenyeni eziphezulu kuqukethwe iwayini elidala, ama-oranges, amagilebhisi avuthiwe.
I-Glycolic acid. Kwavezwa ukuthi le-ANA ikhuthaza ukuphuma kwe-sebum, ukukhipha izilinganiso ezilinganiselwe ebusweni kwesikhumba. I-Glycolic acid iyanciphisa ukubonakaliswa kwe-hyperpigmentation. Le-asidi inesisindo esincane kunazo zonke, esivumela ukuthi singene kalula esikhumbeni futhi siphumelele ngokushesha. Kuboniswa ukuthi ukusetshenziswa kwezimonyo ezisuselwa ku-glycolic acid ezinyangeni ezingu-3-6 kunciphisa ukujula kwamanki, kuqeda imigqa emihle futhi kukhanyisa kakhulu izindawo eziboshiwe zesikhumba. Ngokukhulu kakhulu, itholakala ku-ushukela, kanye nasemagilebhisi aluhlaza.
Citric acid. Unomphumela omhlophe, we-bactericidal kanye ne-antioxidant. Le asidi inesisindo esikhulu kunazo zonke. Umthombo oyinhloko we-citric acid yisithelo sezitshalo ze-citrus.
I-lactic acid iyisenzo esihle sokuphucula nokuphuthumayo. Leli asidi liye lasetshenziswa isikhathi eside embonini yezimonyo njenge-agent enkulu yokuphucula. Umthombo we-lactic acid ubisi omuncu, ama-yoghurts, ama-apula, amagilebhisi, utamatisi ujusi, ama-blueberries, isiraphu ye-maple, i-passionflower.
I-Apple acid i-agent esebenzayo, ivuselela isisombululo samaselula, ikhuthaza amangqamuzana ukuba avuselele. Itholakala ema-apula, utamatisi, kanye nezinye izitshalo nezithelo.
I-asidi salicylic. Akusebenzi ku-alpha hydroxy acids, ngoba isimiso sayo samakhemikhali siqukethe iqembu le-phenolic le-beta-hydroxy acids. E-cosmetology, i-salicylic acid isetshenziselwa ukuthuthukisa ukuhlunga ngokuhambisana nezithelo ze-acids. I-salicylic acid ine-keratolytic, antiseptic, i-antitifungal effect. Equkethe uhlobo lwe-ethers e-birch bark, emaqabunga e-gullet, i-evergreen isigamu-shrub, ehlala emndenini we-heather. Ngokuyisisekelo, zonke izimonyo ziqukethe i-AHA acids eyinkimbinkimbi, ehambisanayo, ukuze umphumela oyifunayo uphumelele.
I-AHA-acids inezinkambiso ezithile, ngoba inqubo yokushisa kwamakhemikhali ayifanele zonke izikhumba. Okokuqala, kuyadingeka ukwenza ukuhlolwa kokungaboni ngaso sonke isikhathi ku-ANA acids. Kulokhu kulesi sikhumba esincane ngemuva kwesandla, kudingeka usebenzise ikhambi. Ngokubekezela okujwayelekile, ukubomvu, ukushaywa, ukuvutha nokuhlungu akufanele kuthuthuke kule ndawo kungakapheli amahora angu-24. Uma lokhu kusabela kwenzeka, ungasebenzisi le mithi. Ungasebenzisi i-AHA-acid uma une-tender, isikhumba esibucayi. Futhi, i-alpha hydroxy acids iphikisana ngokunciphisa okuncane kwezinsimbi, ukuqubuka komzimba, ukulimala okusha, ukushisa kwelanga nokulandela ukukhanya kwelanga isikhathi eside.
Indlela yokwenza i-manicure ye-gradient
Uzilungisa kanjani emaminithini angu-10?
Izindlela zokulungisa ukhilimu ngamafutha anamakha
Uhlelo lokuzivocavoca lokusiza imisipha
I-Horoscope yonyaka omusha ka-2010 wePisces
Isibindi sesilwane ngesitayela se-Stroganov
Izibopho zomsebenzi: Ngingayisebenzela i-Easter?
Ungagcina kanjani amazinyo akho enempilo ngesikhathi ukhulelwe?
Amapancake ngamabhontshisi abamnyama nommbila
Ungadla kanjani kahle ngesifo sesibindi?
Focaccia nge ushizi ne-basil
Amandla - amaphuzu: zokupheka eziwusizo ze-plum jam